China Y mhando Slurry Valve fekitori uye vagadziri | Nortech
Y mhando Slurry Valve
Y mhando Slurry Valve yakakosha kune akawanda maficha nekuti mavhavha akagadzirirwa kushandiswa pane abrasion zvinhu. Y Type Slurry Valve yakakamurwa kuita kuruboshwe uye kurudyi zvikamu zvine chigaro pakati pavo.
Iyo bhaudhi inobatanidza mativi maviri inogona kuunganidzwa kutsiva vharuvhu seat.The vharuvhu neabrasion kuramba, yakanyanya kumanikidza kuramba, kukwira kwemvura uye anti-scabbing kuita.
Iyo Y mhando slurry vharafu inonyanya kupihwa kudzora kana kumisa iyo slurry, iyo slurry mavharuvhu anoshandiswa zvakanyanya mualumumina, simbi, kemikari fetiraiza uye yekuchera indasitiri.
NORTECH ndizvo imwe yekutungamira China Y mhando Slurry Valve Mugadziri & Mutengesi.
Ndeipi iyo Y mhando Slurry Valve?
Y mhando Slurry Valverakakamurwa kuita kuruboshwe uye kurudyi zvikamu zvine chigaro pakati pavo. Chigaro chakaiswa pakati pemaviri emagetsi emuviri, saka chigaro chinogona kutsiviwa zviri nyore .Mitumbi yemagetsi yevhiri yekuruboshwe uye yekurudyi inopihwa mujometri dhizaini, iyo yekupedzisira element kuongorora uye 3D dhizaini software inoshandiswa pakuyerera kuongorora mukati mevhu remuviri wevhavha. .
Iyo vheji yevhavha yekuisa chisimbiso kumeso kweya slurry vheji ine imwe Angle pakati pegomba uye chiteshi ine imwe Angle ine inopinda uye nzira yekubuditsa. Muviri wevhavha wekuruboshwe uye kurudyi wakaparadzaniswa, chigaro chevhavha chakaiswa pakati pemiviri miviri yevhavha, bhaudhi inobatanidza miviri miviri yevhavha inogona kutsiviwa nechigaro chevhavha, iyo vharuvhu mhango ine anti-kukwira uye anti-ngura ndiro yevarindi , Mukuvhura kweiyo vharuvhu nguva, iyo vharuvhu muviri inogona kudzivirirwa kubva kukukurwa uye ngura neiyo yepakati, ine yakakwira kupfeka-kuramba uye anti-ngura basa rakanakisa. Iyi mhando ye slurry vharuvhu inenge isingachinje mafambiro ekuyerera.
Main maficha e NORTECH Y mhando Slurry Valve
Yakatwasuka kuburikidza nemhando, yakaderera kuyerera kuramba.
Kuisa chisimbiso kunoshandiswa pakati pekuisa mapaundi maviri, kuitira kuti iyo yekuisa chisimbiso pamusoro iwirirane nemutsetse kuona kuvimbika kwekuisa chisimbiso uye kudzivirira kuora.
Iyo ine yakakwira yekupfeka kuramba uye kukosora kusagadzikana.
Valve ine inverted yekuisa chisimbiso dhizaini dhizaini, ita shuwa kuti hapana midhiya inodonhedza, yekuisa chisimbiso kuita kwakavimbika, uye kunogona kutsiviwa online kurongedza.
Iyo vharuvhu stem chisimbiso inotora inochinjika graphite uye yakarukwa graphite kuti chisimbiso chiwedzere kuvimbika.
Unyanzvi maratidziro e NORTECH Y mhando Slurry Valve
Slurry vharafu zvikuru akagadzirirwa alumina oxide, mugodhi, metallurgical slurry
Slurry vharafu, kurasa vharafu, yepasi nzira yekubuda vharuvhu
Y mhando, yakatwasuka mhando, angle mhando
Diski yekunze, dhisiki remukati
-29 ~ 425 ° C (zvinoenderana nezvinhu zvakasarudzwa)
Handwheel / Manual gearbox / Pneumatic actuator / Magetsi actuator
Chigadzirwa Ratidza: Y mhando Slurry Valve
Ndeipi iyo Y mhando Slurry Valve inoshandiswa?
Rudzi urwu rwe Y mhando Slurry Valve inoshandiswa zvakanyanya mu Fetiraiza, kuchera, simbi, alumina nemamwe maindasitiri
Pashure: Yakakwira Performance Kaviri eccentric butterfly vharafu lug mhando China fekitori
Zvadaro: 3 nzira chivhariso vharafu
kurasa vharafu yekunze disc
kurasa vharuvhu yemukati disc
sandara pasi vharafu
pombi yekubatanidza vharafu
pombi yekubatanidza vharafu yekunze disc
pombi yekubatanidza vharuvhu yemukati disc
slurry vharafu china
Slurry Valve fekitori
Vakashinga vagere Butterfly Valve lug mhando